Ny Kaaba dia zavatra naorina vita amin' ny vato tokana tamin' ny taonjato faha-7, miendrika goba, miorina eo afovoan' ny Môskea Lehibe ao Maka, any Arabia Saodita, izay norakofana lamba landy miloko mainty, atao hoe kiswa. Ny Kaaba no toerana masina indrindra amin' ny fivavahana silamo. Maro koa ny zavatra madinika voarina manodidina azy. Ao amin' ny zorony atsimo-atsinanana no itsofohan' ny vato mainty.
Ny Kaaba tamin' ny taona 2018
Any amin' ny Kaaba no mitodika ny Miozolmana maneran-tany (na dia ao anatin' ny Môskea Lehibe aza izy iereo) rehefa manatanteraka ny vavaka fanao isan' andro. Mnodidina ny Kaaba no anatanterahan' ny mpanao fivahiniana masina ny fihodinana impito (tawaf), indrindra amin' ny andon' ny fivahiiana masina isan-taona (hajj) na ny fivahiniana masina madiika (umra).
Efa talohan' ny fivavahana silamo no nisian' ny Kaaba izay natokana ho an'ny fanompoana sary, isan' ny andriamanitra nivavahana indrindra tao i Al-Lāt sy i Manat ary Uzza. Rehefa azon' i Mohamady i Maka tamin' ny taona 630 dia nesorina avy tao anatin' ny Kaaba ny sarivongan' ireo andriamanitra ireo.
Araka ny lovantsofina silamo dia nisy Kaaba roa samy hafa tao, ny iray momba ny tany, natokana ho an' ny olombelona, fa ny faharoa kosa momna ny lanitra, natokana ho an' ny anjely. Araka ny lovantsofina silamo ihany dia i Abrahama sy i Ismaela (razamben' ny Arabo) no nanamboatra ny Kaaba.
Amin' ny Miozolmana dia "tranon' Andriamanitra"ny Kaaba, ka ao Andriamanitra no mikasika ny momba ny tany. Sasana idray mandeha isan-taona sy rakofana an' ilay lamba landy mainty ny Kaaba. Hatramin' ny andron' i Mohamady dia nohalehibeazina ny Kaaba: nanamboarana kianja malalaka ny manodidina azy sady nasiana varavarana volamena koa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaaba&oldid=1000620"
Dernière modification le 22 Janoary 2021, à 11:41
Voaova farany tamin'ny 22 Janoary 2021 amin'ny 11:41 ity pejy ity.